Kulan Micna Daro ah oo Kooxda Jwxo-shiil iyo Tuugta Daba Taagan Denver, Colorad ku Qabteen oo Lagu Kala Tagay – Rasaasa News
Aug 11, 2009 Jwxo-shiilada
Sheeko la yidhaahdo waxay ka soo jeedaa qabiilka Ciisaha ayaa tidhaahda “saala saalaysaye walee sidaasaanan kaaggaga hadidhin” xiligii ay diinta Islamku Somalida ku yarayd ayaa niman xer cilmi ah, soo martiyeen reer Ciise ah, marti galyadii ayaa la qaybsaday xertii, Sheekhii xerta watay ayaa loo geeyey ninkii reerka ugu geesisanaa, si uu Sheekha u dilo oo reeku u helaan karaamada Sheekha uguna diiqaan Qabrigiisa sanad walba. Wadaadkii ayaa ogaaday in la dili doono kolka uu cuntada cuno deedna intii uusan cuntadii cunin ayuu cararay, ninkii ayaa daba orday, kolkaasu wadaadkii tuuray go,ii, ushii, ubaweysadii iyo wixii uu qalab watay, orodkii ayaa tusbixii ka go,ay kolkaas ayuu ninkii eryanayey mooday in uu xaga dambe wax ka imanayo wadaadka kolkaasuu yidhi “saala saalaysaye walee sidaasaanan kaagaga hadidhin”.
Minnesota, Minnepolis oo ah xarunta Jaaliyada Somalida Ogadeeniya, ayaa waxaa laga xoreeyey gabi ahaanba kooxda Jwxo-shiil, markii ay dadweynaha halkaas degan fahmeen dhibaatooyinka ay wadaan kooxda Jwxo-shiil. Waxayna dadweynuhu dhaheen uf iyo kir, waxayse si dhuumaal ah ugu kulmayaan magaalooyinka ayna cidina ka deganayn Jaaliyada Somalida Ogadeeniya. Waxaana warbixinta hoose nooga soo diray wiil tagsiile ah oo moodayey shirka Colorado in loo qabanayo Jaaliyada Orormo oo isaga laftigiisa marti qaaday.
Nin aduun ku nolow maxaa aragti ku laaban, run ahaanti wax walba waad arki inta aad aduun ku noshahay, Malinti Sabtida ahayd ayey kooda Jwxo-shiil oo u hogaminayo gacan ku dhiigle Ina Maadey ay yimaaden magalada Denver. Isaga oo uu Gaani Xirsi Axmed borsada u wado, oo uu kula balamay Sheekeye in uu borsada ka sii nasiyo, ka diba marki ay yimaadaan Denver. Gacanku dhiigle Ina Maadey, ayaa waxaa garoonka ugu tagay nin aan dhamayn oo la yidhahado Ina Sheekh Abti, waa Muxiyadin oo isku magacaba in uu madax u yahay garabka Jwxo-shiil runtina ah nin aan ABC.. aqoon dhagaystana waxaa uu u yeedhiyo Sheekh Cabdulahi oo ah Jwxo-shiilo ah.
Runtii dad badan meesha lagamaba filanayo, waayo Colorado, waa meel ay dadku ku yar yihin oo laga filan karo ugu badnaan 30 qoys oo iyaga laftigoodu fahamsan kooxda Jwxo-shiil, laakin Muxiyadin-waal wuxuu isku dayay in uu bal si qabiil ah wax ku xaliyo wuxuuna bilaabay in uu dhaho waryaa reer Suber ah, kolkii uu in badan ku cataabay eraygaas waryaa reer Subeer aheey ayey odoyashii magaladu ugu jawaabeen adeer anagu ma tageero qof dadkiiba laynaya.
Markii dambe waxaa khasab ku noqotay in uu soo u uruuriyo dhawr gabadhood oo inta badan ay isku guri [block] ku nool yihin, ka dibna uu geeyaay meesha uu kulanka ku qabanayay isugayn dadkii ka soo qaybgalay ayey tiradoodu noqotay 66 ruux oo ay qaar Oroma yihin, qaarna Somalida kale yihiin.
Mida kale waxaa meesha ka dhacaday arin cajiib ah oo ayna dadku marnaba filneynin taas oo ah, waxa meesha yimid Da,uud Ibssa oo ah nin arimaha dibada u qaabilsan qayb ka mid ah ururka OLF oo is lahaa runtii waxaad arkii dontaa dad badan oo reer ogadeniya ah oo soo dhaweynaya Ina Maadey, wuuse yaabay, mar uu nin shirka ka qayb galayay weydiyay sidee ayay kuula muqata kulanku, wuxuu ku jawaabay anigu marnaba ma modeynin in uu ogadenku sidaa uga soo hor jeadedo garabkan, laakin anigu waxaan aad u aqaaanay ayuu yidhi “Dr Dolal oo ahaa nin halgamaa reer Ogadeeniya ah anigana shakhsiyan aanu isku wanaagsanayn”.
Gabagabadii waxaa makarafoonka qabsaday Muxumed Garabo oo dadku inta badan u yaqaan [huuraale] oo ah nin mirqansanaa waqtigaas, runtiina ay ka muqatay qadiro badan isaga oo ka hadaleyay arimo anaan khuseynin danta Ogadeniya, wuxuuna ku mashquulay in uu ka sheekeyo qaxootiyadii Somaliya sida jalaalaqsi.
Waxaa xigay oo makarfoonka qabsaday gacan ku dhiigle Ina Madey, waxuuna runtii ku hasaawiyay dadkii been runtii ay dadku aad ula yabeen oo ahay maanta Ethiopia aniga ayay I wada dabafadhiyaan, mida kale waxuu sheegay in uu diyar u yahay in uu wada hadal la galo garabka ka soo horjeeda iyado dadku arintaa u arkay in uu yahay nin ujeedadi u lahaa gadhay taas oo ah in uu dilay Dr Mohamed Sirada Dolal.
Isku soo wada duub oo Ina Maadey oo runtii dhaforkisu aad u xun yahay ayaa ka anbabaxay Colorado, waxayna rasaasa.com idin balan qadeysa in ay idin soo gudbiso cid alaale cidi manta garabsiinaysa kooxda Jwxo-shiil ee ku nool Colorado anaga oo mid mid uga faloon doona inta ay ku mashquulsan yihin shirqoolka shacabka Somalida Ogadeeniya.